Dị ka òtù ahụ si kwuo,Ụzọ ígwè DraperyA na - ekewa n’ime eletrik ígwè Drapery na a na - enwe oké nri Drapery.
Ọkpụkpụ ụgbọ mmiri na - eletrik bụ́ Drapery: ọ bụ ụgbọ mmiri na - eji ụgbọ mmiri na - akpọ. Ọ dị nanị mkpa ịgbanwe ọkpụkpụ ọkpụkpụ maka ịrụ ọrụ, bụ́ nke siri ike, dị jụụ ma dị njọ. Ọ bụ ihe a na - eme ka e wezụkwagharị n’ime ihe ndị a na - akpọ Drapery. A na - ewepụta ụgbọ ahụ kpọmkwem n’ahụ́ nke aluminium alloy, nke ọ bụghị nanị na - ebelata mpụta nke igbe ákwà na nsụnye nsụgharị nke ike ahụ, ma na - ezere mmetụta nke n’èzí n’ọgbọ, ma na - amụkwasị ntụkwasị obi nke usoro ahụ. A na - agbagharị ụgbọ mmiri e ji ihe ndị a na - akpọ aluminium nke dị oké ọnụ ahịa na ike dị ukwuu ma ọ bụghị mfe igbochi. A na - akwụsị n’elu n’elu iji gbochie agadi nakwa n’ahụ́. Ịnyochie e ji akụkụ ahụ́ nke dị elu nke a na - eme emepụta akpụkpụ na ume n'ahụ́, bụ́ nke na - egosi nchebe na ịdabere n’aka nke iji mee ihe na iji mee ihe.
Akwụkwọ ígwè Drapery: a na - ekewa n’ime ihe ndị a na - akpọ Drapery n’ime ihe ndị a na - akpọ Drapery. A na - anabata usoro a na - arụ nri ígwè n’ahụ́ n’ahụ́ nri ígwè nke na - arịọ ígwè. Mkpụrụpụta a na - arịnyị n’ahụ́ a na - egwe n’ahụ́ a kpọrọ ihe, n’ahụ́ ya, nkwado ụgbọ mmiri na ihe ndị ọzọ. Mgbe a na - arụ ọrụ e ji ígwè bụ́ Drapery, a na - atụgharị ígwè iji gbagharịa site n’ịdọpụ ígwè ahụ. N’oge a, ike n’agbanyeghị n’ebe a na - ahapụ n’oge a na - eme ka a gbagharịa n’akụkụ ruo n’akụkụ ahịhịa n’akwụkwọ ịrụgharị ọnụ, nke na a na - akpọ ákwà ígwè Drapery na - aga elu na ala. Akụkụ nke nchịkwa nke drọwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, nke n'oge mbụ. Onye kere eji ọmụma kwụsịrị ifufe isii n'akwụkwọ ọdịnala, ma gbanwee ọdịdị nke akụkụ ụfọdụ, nke ghọrọ usoro drọwa ụgbọ mmiri nke oge ugbu a.
Ochie:Ọdịdị nke ákwà Sequin
Ihe Ndị Na - akụsị Akwụkwọ n’Ebe Ọkụ Na - akụsị Akwụkwọ
Ihe Ndị Na - akụsị Akwụkwọ n’Ebe Ọkụ Na - akụsị AkwụkwọMCC-3:Ọ na - enwe ákwà dịgasị iche iche na otú ị ga - esi nhọrọ.Ihe ndị ahụ:·Ọdịdị dị mma - eme ka e nwee mmetụta a na - achọ mma.·Ihe àmà na - e...